रोचक – yuwa Awaj
एजेन्सी । २७ वर्षीया सयाली काले नाम गरेकी एक युवतीले डेटिंग एपको माध्यमबाट १६ जना केटाहरुसंग प्रेम गरेकी छन् । उनी भारतको पुणेमा पर्ने पिंपरी चिंचवड इलाकामा बस्दै आएकी छन् । उनी शिक्षित युवती हुन् । उनको रामै्र जागिर पनि थियो । तर कोरोना महामारीको कारण उनको जागिर गएपछि उनले रोजीरोटीकोलागी यस्तो बाटो रोज्न पुगेकी हुन् । आफ्नो गुजारा चलाउनकोलागी उनले डेटिंग एपको माध्यमबाट केटाहरुसंग प्रेम गर्दै पैसा असुल्दै उनले आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आईन् । तर यो उनको तरिका गलत भएको हुनाले यतिबेला भने उनी जेलमा छिन् । सयाली कालेले उक्त डेटिंग एपको माध्यमबाट चेन्नईका अशीष कुमारसंग गएको हप्ता चिनजान गरेकी थिईन् । उक्त चिनजानकै आधारमा आशिष कुमारलाई उनले पुणेमा बोलाएर एउटा होटेलमा लगेकी थिईन् । त्याहाँ उनले आशिष कुमारलाई कोल्डड्रिंकमा न’शा’लु प’र्दा’थ मि’ला’एर खु’वा’एपछि उनीसंग भएको सबै गहना र पैसा लुटेकी थिईन
Dec22020 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौं : उनी वाणिज्य बैंकका सबैभन्दा कान्छो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् । उमेरले भर्खर ३९ वर्ष पुरा गरेका छन् । एक वर्षमा बैंकबाट तलब,भत्ता, बोनसबाट साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । एक वर्षमै यति धेरै तलब सुविधा लिने व्यक्ति हुन्– रोसन कुमार न्यौपाने अर्थात एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । बैंकले सार्वजकि गरेको २३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार न्यौपानेको तलबसहित अन्य आम्दानी एक वर्षमा ३७ लाख रुपैयाँ बढेको छ । न्यौपाने एक वर्षमा तलब,सुविधा, भत्ता मात्र १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । बैंकको नाफाबाट ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बोनस बुझेका छन् । तलबभत्ताको अतिरिक्त उनले बैंकका अन्य थुप्रै सुविधा पाउँछन् । न्यौपाने सवारी साधन, चालक, बीमा लगायतका सेवा पनि पाउँछन् । न्यौपानेले त्यसै यत्रो तलब खाने हैसियतमा पुगेका भने होइनन्् । उनको मेहनत, लगाबले सधैं पहिलो भएका हुन
Nov232020 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : तपाईले भर्खरै प्रहरी पोशाकमा आए के गर्नुहुन्छ होला ? यसो सोच्नुस त । हो आज हामी तपाईलाई यस्तै सानै उमेरमा प्रहरीको पोशाकमा टिकटक हल्लाएका भाईको बारे कुरा गर्दैछौ । उनको नाम हो पृथ्बी जंग आले मगर, जो बल्ल अहिले ९ बर्षमा लागेका छन । अचम्मको कुरा त के छ भने यिनले गर्ने सबै टिकटक भिडियोहरुमा नेपाल प्रहरीको मात्र पोशाकहरु लगाएका हुन्छन र अहिलेसम्म प्र'हरीबाट पनि त्यस्तो कुनै नोटिस नआएको बताउछन यिनी । देख्दा क्युछ र लजालु देखिने पृथ्बी टिकटकमा भने आफनो बाबाको कारण आएको बताउछन र आफनो लगाब पनि दिन प्रतिदिन यसैमा बढदै गईरहेको पनि बताए । प्रहरी बनेका भनेर धेरै मिडियामा पनि भाईरल भए तर उनी त्यति सानै उमेरमा कसरी प्र'हरी बन्न सक्थे होला र ? भन्ने सबैको सोच पनि आयो र नभन्दै उतम ड्रेस पनि सुटिङको लागि लिएको रहेछ । सानै उमेरका प्रहरीको बर्दी लगाउन पाएका पृथ्बीको लक्ष्य भने ठूलो भएस
लमजुङ : एकजनाले एकपटकमा कति पाथी धान बोक्छन् होला ? १० पाथी, १५ पाथी, एक मुरी । मुरीको धोक्रो बोक्नेहरु बिरलै भेटिन्छन् । लम्जुङमा भने एकजनाले एकै खेपमा ३ मुरी धान बोकेका छन् । तीनमुरी धान बोकेर खलाबाट घरधनीको घर पुर्याएवापत ४० वर्षिय राजेन्द्र पौडेलले बाजी नै जिते । उनले एक एक मुरीले भरिएका तीनवटा धानका थैला एकैपटक नाम्लोको फेरो लगाई बोकेर खलेगरा देखि धानका धनीको घर रहेको स्थानसम्म १५ मिनेटको पैदल दुरीको उकालो बाटो पार गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । मध्यनेपाल नगरपालिका– ६ को गुम्बाबेसी गाउँका ४० वर्षीय राजेन्द्र पौडेलले बाजी जितेपछि स्थानीयले नगद पुरस्कारका साथ पुरस्कृत गरेका छन् ।तीन मुरीमा ६० पाथी हुन्छ ।गुम्बाबेसीका देव गिरी सन्यासीको दाइँमा सहयोग (पर्म लगाई) गर्न गएका राजेन्द्रले दाइँ सकिएपछि एकैपटकमा ३ मुरी धान बोकेपछि उनलाई पुरस्कृत गरिएको सोही दाइँमा रहेका स्थानीय ध
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको अनुहारको चमक योग मात्र होइन, उनको सुखी वैवाहिक जीवन पनि हो। लन्डनका व्यवसायी राज कुंद्रासँग बिहे गरेकी अभिनेत्रीले आफ्नो विवाहित जीवन निकै रमाइलोसंग विताइरहेकी छन्। राज कुन्द्राले पनि आफ्नी पत्नीलाई विलासी जीवन दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनले शिल्पालाई बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट, महँगा कारहरू उपहारका रुपमा दिएका छन्। शिल्पा विवाहको वार्षिक उत्सवमा सबैभन्दा महंगो उपहार पाउने नायीका बनेकी छन् । विवाहको वार्षिकोत्सवमा, राज कुन्द्राले शिल्पालाई विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफाको १९ औं तलामा एउटा अपार्टमेन्ट उपहार स्वरूप दिएका छन् । यद्यपि शिल्पाले केही दिन अघि नै उनको सम्पत्ति बेचेको बताई सकेकी थिइन्। विवाहको वार्षिकोत्सव मात्र होइन, विवाहको अवसरमा पनि राज कुन्द्राले शिल्पा शेट्टीको लागि यस दिनलाई स्मरणीय बनाउने प्रयास गरेका थिए । क